ခေါင်းကိုက်တာလေးပဲ ဆိုပြီး ပေါ့ဆမိလိုက်လို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကောင်လေး
August 10, 2019 Thuta Star 0
ခေါင်းကိုက်တာလေးပဲ ဆိုပြီး ပေါ့ဆမိလိုက်လို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကောင်လေး သင်ဟာ ခေါင်းကိုက်တတ်တဲ့ သူ တယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းထဲမှာ မကြည် မလင်နဲ့ တစ်ခုခုကို ထမ်းထားရသလိုကြီး ဖြစ်နေလား။ ဒါဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တခါတလေ ခေါင်းကိုက် ပျောက်ဆေးလေး သောက်လိုက်၊ ဒါမှ […]
အင်အားကြီးတိုင်ဖုန်းဝင်ရောက် ၊ လူ ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွေ့ ပြောင်းနေရ
Lekima တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဒီကနေ့မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မုန်တိုင်းကြောင်း ၁၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၆ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူဦးရေး ၁ သန်းလောက်ကို ဘေးလွတ်ရာကို ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားလိုက်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာက ပြောပါတယ်။ Lekima မုန်တိုင်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်ပြီး ၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ် […]
သားညီရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင်တော့မယ့် ဒွေးရဲ့ သမီးလေး
သားညီရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင်တော့မယ့် ဒွေးရဲ့ သမီးလေး ဆည်းလည်း ဦးလေးဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ သားညီ ရိုက်ကူးမယ့် “…အခြားမဲ့ ၌” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်မယ့် သရုပ်ဆာင် ဆည်းလည်း ရဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေပါ ။ “…အခြားမဲ့ ၌” ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲကို […]
11.8.2019 မှ 17.8.2019 ထိ ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း
ဆရာ မင်းသိင်္ခရဲ့ 11.8.2019 မှ 17.8.2019 ထိ တပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.. ဗေဒင် ဟောကိန်း များသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. မိမိ၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အတွက်လည်း share ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်. […]
မိသားစုဝင် ၇ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်
မိသားစုဝင် ၇ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းကျေးရွာသား တစ်ဦးက မြေပြိုစဉ် မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဘီဘီစီကို ခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၃၂ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် […]
မုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’
မုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’ ‘စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေ ရိတ်ချိန်သိမ်းချိန်မှာ မုန်တိုင်းက ၄ လုံးလောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်’ (မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်နှင့်အင်တာဗျူး) ယနေ့ရာသီဥတုသည် တကမ္ဘာလုံး၌ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုသည်လည်း လွန်ခဲ့ပြီးသောနှစ်ကာလများနှင့် လုံးဝမတူတော့ပါ။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း ပို၍ပို၍ သိသာလာပါသည်။ […]
ကျောက်ပန်းတောင်း ပုံဂံညောင်ဦးလမ်း ယနေ့ ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းအကျော် ချောင်းများ ရေကျနေပါသဖြင့် အထူးသတိပြုသွားလာကြပါရန်…
ကျောက်ပန်းတောင်း ပုံဂံညောင်ဦးလမ်း ယနေ့ ဗျတ္တပန်းဆက်လမ်းအကျော် ချောင်းများ ရေကျနေပါသဖြင့် အထူးသတိပြုသွားလာကြပါရန်… . ကားအစီး ၂၀၀. ​ကျော်​ ပိတ်​မိ​နေ… Photo Win Min Tun ကွောကပြနြးတောငြး ပုံဂံညောငြဦးလမြး ယနေ့ ဗတျွတပနြးဆကလြမြးအကွြော ခွောငြးမွား ရကနွေပေါသဖှငြ့ အထူးသတိပှုသှားလာကှပါရနြ… . ကားအစီး […]
ရေကြီးနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်က နာမည်ကြီး ဇင်းကြိုက်ရေတံခွန် ရဲ့ ရေလုံးကြီးများနှင့်ဇင်းကျိုက်မြို့ အခြေအနေ ( ရုပ် သံ )
ရေကြီးနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်က နာမည်ကြီး ဇင်းကြိုက်ရေတံခွန် ရဲ့ ရေလုံးကြီးများ ရုပ်သံ ဒီအတိုင်းမှ မိုးအင်မတန်ကောင်းတဲ့ ဒေသတေဖြစ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ ဒီနှစ် မုတ်သုန်မိုး မုန်တိုင်းမိုးတွေကြောင့် မြစ်ရေများလျှံတက်တဲ့အပြင် 9.8.2019 နံနက်ပိုင်း 1နာရီခန့်ကနေ စတင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ အလွန်အားကောင်းတဲ့မိုးကြောင်း သေကြေပျက်စီးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ ကြောက်မယ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့် တောင်တွေပြို၊ […]
ဒီနေ့ ဝမ်းနည်း ရင်နင့် ကြေ့ကွဲစရာ သတင်း …
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ သဲဖြူကုန်းရွာ ကြေကွဲစရာမြင်ကွင်းတွေပါ ။ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အားလုံး သိအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ယနေ့ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးထပ်တွေ့ပါပြီ ။တချို့အိမ်တွေ တစ်မိသားစုလုံးနီးပါးသေဆုံးကြပါတယ်တဲ့။ တောင်ပြိုမြေခဲတွေအောက်မှာလူတွေ အိမ်တွေ ကားတွေပိတ်မိနေပြီး ဆက်လက် ရှာဖွေနေဆဲပါ။ မိုးကလည်း ဆက်တိုက်ရွာနေလို့ အရမ်း ခရီးမရောက်ဖြစ်နေပုံပါပဲ။ […]
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဟာ ယနေ့အချိန်ထိ နာမည်ကြီးနေတုန်းပါဘဲ ။ သူဟာ တကယ့်ကို အောင်မြင်ကျော်ကြားလွန်းတဲ့ ပျိုပျိုမေတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကြီးပေါ့။ သူဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆင်ပြေစွာနေထိုင်တက်သူဖြစ်ပြီး ဝေဖန်ခံရတာ အများဆုံးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုဝေဖန်မှု ကိုတော့ သူ့အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းဟာ […]